08 | February | 2021 | QEERROO
Guutummaa Oromiyaa keessatti Fincilli Diddaa Gabrummaa Itti Fufee jira. Guyyoota Muraasa as deeman keessas caalaatti jabaatee bifa adda addaan magaalotaa fi Baadiyyaa Oromiyaatti itti fufa.
Godina Horroo Guduruu Magaalaa Shaambuutti FXG itti fufee jira.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa ,Magaalaa Shaambuutti FXG itti fufee jira.
Walisootti hirriiri deeggarsa MCBOf godhamuu fi hidhamtoota keenyaaf lubbuu keenya kennina jedhu gaggeeffamaa jira.
sirna pp balaaleffatuu fi MCBO ni tumsina ABO fi KFOn dhaabota keenya hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haal duree tokko malee hiikamuu qabu.
Hidhamtoota siyaasaa keenyaaf lubbuu keenya ni kennina PPn diina Oromoo fi lammiilee Oromiyaati kan jedhu hiriirri mormii Kibba Lixa Shaggar Magaalaa Walisoo keessatti barattoota mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi 1ffaan kan eegale hawaasa maaaglichaa hirmaachisuun gaggeeffamaa jira.
Nagaa fi tasgabbii waaraaf MCBO hundeeffannee gara Filannootti akka deemamuuf wabii nageenya keenyaa MCBO kan qaamota hawaasaa hunda hirmaachise haa hundeeffannu.
Harargee Adaboot keessatti hiriirri barattootaan eegale hawaasa hirmaachise
[SQ- Guraandhala 8/2021]
mormii sirna pp balaaleffachuun Barattootaan Oromiyaa bakkoota hundatti itti fufe Harargee Asabootiitti hawaasa magaalichaa dabalatee mormii bulchinsi pp nuuf hin taatu jedhu gaggeeffamaa jira.
Hiriira kana irratti hidhamtoota siyaasaa saffisaan Akka hiikaman kan gaafatan yoo tahu paartiileen Oromoo ABO fi KFOn dhaaba ummata Oromoof dhaabbatanidha jechuun tumsa isaaniif qaban dhageesisaa nagaa fi Tasgabbiin akka jiraatuuf filannoo Biyyoolessaa dursa MCBO hundeeffachuun dirqama lammiilee Oromiyaa tahuus dhaamsa dabarfataniiru.
Mi’eessootti hiriirri mormii pp balaaleffatuu fi MCBO tumsu gaggeeffamaa jira.
Harargee lixaa Mi’eessootti Hiriirri sirna abbaa irree pp balaaleffatu kan tumsa MCBOf godhamu barattootaa fi hawaasa naannichaan gaggeeffamaa jira.
Hiriira kana irratti lammiileen Oromiyaa kan qooda fudhatan yoo tahu hidhamtoonni siyaasaa nuuf haa hiikaman , MCBO nuuf haa hundaayu , filannoo dura nageenyi lammiilee mirkanaayuu akka qabu dhaadannoolee hiriirichaati.
Hidhamtoonni siyaasaa lagannaa nyaataa irra jiranis tahe kanneen manni murtii bilisa baasee poolisiin hidhee dararu hatattamaan akka hiikamanii fi qaamota olaantummaa mana murtii tuffatan irrattis akka tarkaanfiin fudhatamu gaafataa sagalee isaanii dhageesisaa jiru
Lixa Oromiyaa Magaalaa Gimbiitti Hiriirri mormii pp barattootaan gaggeefamaa jira.
mormii barattoota mana barumsaa qophaayinaa Amboon Guraandhala 5/2021 kan eegale yeroo amma aoromiyaa hunda keessatti hiriirri kun jabaatee itti fufuun bahaa hanga dhihaa , kaabaa hanga kibbaa oromiyaa keessatti balaaleffannaan sirna pp barattootaan dhohee kan jira.
Haala kanaan guyyaa har’aa guraandhala 8/2021 Oromiyaa lixaa Gimbii fi Mandiittii gaggeeffamaa kan jiru yoo tahu kibba Oromiyattis Boorana Yaaballoottin gaggeeffamaa jira.
akkasumas kibba baha Oromiyaa Arsii keessatti sochiin hiriiraa kun barattootaan gaggeffamaa kan jiru yoo tahu Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuuttis sochiin barattootaa kun eegalee jiraachuu gabaasaan arganne ifa godha.
Hiriira kana irratti dhaadannooleen barattootaan gaggeeffamaa jirani:
Hidhamtootni siyaasaa haa hiikaman
MCBO lammiilee Oromiyaaf haa hundeeffamu
Ajjeechaan lammiilee Oromiyaa irratti waraanaan gaggeeffamu haa dhaabbatu
ppn nun bulchitu kan jedhuu fi kanneen biroon dhaadannoolee hiriira kanaati.
Ajjeefamuu Barataa Diqqaa Dabassoo booda hiriirri mormii haalaan dhohe.
Ganama har’aa Godina Booranaa Magaalaa Yaaballootti barattoota karaa nagaa sagalee isaanii dhageesifataa jiran irratti waraanni pp dhukaasa baneen barataa Diqqaa Dabbasoo yoo wareegamu barattoota biraa irra miidhaa qaqqabuun dhagahame.
Barattoota nagaan sagalee isaanii dhageesifataa ture irratti dhukaasa banameen miidhaa qaqqabetti kan mufatan yeroo ammaa dargaggootni magaalaa Yaaballoo barattoota waliin hiriiruun hiriira balaaleffannaa sirna PPn amma itti jiru cimsanii gaggeeffachaa jiru.
Boorana keessatti Hiriira Mormii sirna pp balaaleffatu irratti lubbuu nama tokkoo darbe.
Godina Booranaa magaalaa Yaaballootti hiriiraa sirna pp balaaleffatu dhoyeen barataa #Diqqaa_Dabbasoo poolisii Oromiyaatiin ijjeeffamee jira.
Hiriirri kun ganama kana Guraandhala 8/2021 kan gaggeeffamaa jiru yoo tahu kanneen hidhaman haa hiikaman ,MCBO hundeeffachuun nagaa fi Tasgabbiin haaraan Oromiyaa keessatti haa jiraatu,Haqni Hacaaluu haa bahu kan jedhu dhaaddannoolee hiriiricha irratti dhagahamaa turanidha.